डा.मिनेन्द्र रिजालको ‘बोल्ड’ निर्णय: एक्कासी किन गरे रक्षा मन्त्रालयबाट अलग हुने घोषणा ? - ramechhapkhabar.com
डा.मिनेन्द्र रिजालको ‘बोल्ड’ निर्णय: एक्कासी किन गरे रक्षा मन्त्रालयबाट अलग हुने घोषणा ?
नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन डा.मिनेन्द्र रिजालका लागि सुखद रहेन । महामन्त्रीमा चुनाव हारेपछि उनले विहीबार एक्कासी रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट अलग हुने घोषणा गरे । प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई रक्षामन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको पत्र थमाइदिए ।
त्यसपछि शुरु भयो उनीप्रति आम मानिसको प्रशंसा । ‘त्याग, निष्ठा, नैतिकता’को उच्च प्रदर्शन गरेको भनेर उनको खुलेरै तारिफ भइरहेको छ । राजनीतिक नेतृत्वको दौडबाट पराजित भए पनि लाभको पद नछाड्ने नेपाली संस्कारमा उनले नौलो थिति बसाइदिए । उनले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर राजीनामा आफ्नो आबेगको निर्णय नभएको प्रष्टीकरण दिए ।
राजीनामा रोक्न कांग्रेसकै नेताहरुले पहल गरे पनि त्यो सफल भएन । पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने,‘एउटा व्यक्तिलाई काम गर्दा उपलब्ध हुने पुँजी उपलब्ध नहुने भएपछि मेरा प्रयास निरर्थक हुनेछन् भन्ने लागेर मैले निर्णय गरेको हुँ ।’
महामन्त्रीमा ठूलो मतान्तरले पराजय व्यहोर्नु परेकाले भागबण्डा खोजेर मन्त्री रहिररहन उचित नलागेको र जबर्जस्ती मन्त्री भइरहन आवश्यक नठानेकाले इज्जतका राजीनामा दिएको बताएका उनले एउटा अप्रिय लाग्दो संकेत पनि गरे । उनको त्यो संकेत ‘राजनीतिमा रहन पनि सक्छु वा नरहन पनि सक्छु’ भन्ने भनाइप्रति धेरैले चासो देखाएका छन् । उनको भनाइ थियो,‘ एउटा कुरा पक्कै हो राजनीतिमा रहुँ वा नरहुँ कांग्रेसमा क्रियाशील रहुँ वा नरहुँ देशका लागि अझ बढी काम गर्न सक्ने क्षमता र आँट छ भन्ने लाग्छ ।’
बरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालले डा.रिजालको निर्णयलाई खुलेर प्रशंसा गरेका छन् । उनले भनेका छन्,‘डा मीनेन्द्र रिजाल कुनै समयमा लोकप्रिय तरुण नेता थिए । अमेरिकामा पढेर, पढाएर परिपक्व भएका डा.रिजालले संगठनको चुनाव हार्नु अनौठो होइन । तर, चुनाव हारेपछि मन्त्रीपद छाडनु अनौठो कुरा हो हाम्रो देशको सन्दर्भमा । असल आचरणको प्रारम्भ गरेकोमा शुभकामना मीनेन्द्र ।’
कांग्रेस नेता अर्जुनरसिंह केसीले रिजालको राजीनामालाई कांग्रेसभित्र नैतिकताको प्रक्षेपण भएको भन्दै नैतिक अडानको प्रशंसा गरेका छन् । पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति विष्णु निष्ठुरीले समकालीन राजनीतिको महत्वपूर्ण पाठका रुपमा लिंदै हुकुमी शैलीमा नेतृत्व हडप्ने र लाचाल बनेर पदमा टाँसिएर बस्ने प्रवृत्ति तर्सिनुपर्ने धारणा राख्छन् ।
हुनत उनले राजीनामा दिइरहनु नपर्ने एकथरीको विश्लेषण छ । कार्यकर्ताले हराए पनि जनताले जिताएर पठाएका उनी निराश बनिहाल्नु नपर्ने कतिपयको बुझाइ छ । नेता अमरेश कुमार सिंहले उनले राजीनामा नदिंदा पनि हुने बताएका छन् । महामन्त्रीबाट पराजय भए राजीनामा दिने मनस्थिति पहिल्यै बनाइसकेको बताएका रिजालले भने, ‘म दृढ निर्णयमा उभिएको छु। हारेको थाकेको सिपाही जस्तो होइन। आउने दिनमा देश सेवा अझ बलियोसँग गर्न सकुँ ।’
यद्यपि डा.रिजालको राजीनामालाई कांग्रेसकै नेताहरु गणेशमान सिंह, शैलजा आचार्यलगायतसँग पनि तुलना गरिएको छ । पदबाट हारेर पनि नैतिक रुपमा विजयी भएको पनि ब्यापक प्रसंशा भएको छ । अशोज २२ गते रक्षामन्त्री भएका डा.रिजालले आफूलाई रक्षामन्त्री भएर काम गर्ने इच्छा दोस्रो जनआन्दोलनपछि जागेको पनि बताएका छन् । तर रक्षा मन्त्रालयको यात्रा उनको ७० दिन भन्दा बढी टिक्न सकेन ।